Ixesha kunye nabahlobo 62
Ilungelo lokushicilela, i-1916, nguHW PERCIVAL.
Ithetha ukuthini igama elithi “Umphefumlo” kwaye lisetyenziswa njani igama elithi Umphefumlo?
Eli gama lisetyenziswa ngeendlela ezininzi ezahlukeneyo. Abo bayisebenzisayo banomthetho ongaqondakaliyo wento abanenjongo yokuyila ngayo. Konke abanako engqondweni kukuba yinto engengokwenyama; ukuba ayisiyonto imbi ngokwasemzimbeni. Ngapha koko, eli gama lisetyenziswa ngokungakhethi cala, njengoko kunjalo ngokwendalo apho kukho iidigri ezininzi kuphuhliso lwento, kwaye akukho nkqubo eyamkelweyo yokuyila la madigri. AmaYiputa athetha ngemiphefumlo esixhenxe; I-Plato yomphefumlo onamacala amathathu; amaKristu athetha ngomphefumlo njengento eyahlukileyo ngokomoya nasemzimbeni. Intanda-bulumko yamaHindu ithetha ngeendidi zemiphefumlo, kodwa kunzima ukuphina ezi ngxelo. Abanye ababhali be-theosophical bahlula phakathi kwemiphefumlo emithathu-umphefumlo kaThixo (buddhi), umphefumlo womntu (imana), kunye no-,, umphefumlo wesilwanyana. Ababhali be-theosophical abavumelani kwinto ekufuneka isetyenziswe kuyo umphefumlo. Ke akukho nto icacileyo, akukho kungqinwa, ngaphaya koku isigama umphefumlo usigubungela kuncwadi lwasosophical kwiindidi ezahlukeneyo zobume obungabonakaliyo. Ke ngoko, akunakwenzeka ukutsho ukuba ihlala ithini igama lomphefumlo.
Kwintetho eqhelekileyo amabinzana anjengokuthi "uthanda ngentliziyo nangomphefumlo," "Ndingawunikezela umphefumlo wam ngenxa yayo," "ndiwuvulile umphefumlo wam," "umsitho womphefumlo kunye nokuhamba kwesizathu," "ngamehlo anentliziyo," "izilwanyana imiphefumlo, "" imiphefumlo yabafi, "yongeza kolu didaniso.
Kubonakala ngathi into eyinto enye efanayo kukuba umphefumlo uthetha into engabonakaliyo kwaye ingabonakali, kwaye ke ayisiyonto yasemhlabeni, kwaye umbhali ngamnye usebenzisa eli gama ukugubungela loo nxalenye okanye iinxalenye zezinto ezingabonakaliyo njengoko eziva onwabile.
Koku kulandelayo zinikwe ezinye iimbono zokuba igama elithi umphefumlo lisetyenziswe njani.
Ukusetyenziswa kweziyobisi kubonakala ngexesha ngalinye lokugqabhuka kwezinto, kuyaphefumlelwa. Xa into iyiphefumla ngaphandle, iyaziphefumla njengezixhobo; Oko kukuthi, amaziko azimeleyo, iyunithi nganye. Icandelo ngalinye linokubakho, nangona ingeyiyo imeko yangoko, yokuba likhulu kakhulu elingaqondakaliyo. Icandelo ngalinye xa liphefumlelwe linento ezimbini, oko kukuthi, elinye icala liyatshintsha, elinye alitshintshi. Icala elitshintshayo yinxalenye ebonakalisiweyo, engaguqukiyo yinxalenye engacaciswanga okanye yento. Inxalenye ebonisiweyo ingumoya kunye nomphefumlo, amandla kunye nomcimbi.
Obu bume bomoya kunye nomphefumlo bufumaneka kuyo yonke iseti yotshintsho ephumelela omnye komnye ngexesha lokubonisa.
Iyunithi nganye ingena ngokudibeneyo kunye neyunithi nganye, kodwa ingaze iphulukane nobuqu bayo, nangona ingenazisi kwasekuqaleni.
Kumgangatho wokudalwa komzimba ukusuka kwinqanaba lokuqala lokomoya ukuya kumanqanaba okugqibela okuqonda, oko kukuthi, kwinto yomzimba, umoya uphulukana nobuncinci bayo, kwaye izinto ziya zanda ngokwamanqanaba afanayo. Amagama asetyenziswa endaweni yomoya, ayahambelana nayo, ngelixa umbandela usetyenziswa endaweni yomphefumlo.
Umntu osebenzisa umbandela wegama makangacingi ukuba uwusasaze ngegama lomphefumlo nokuba uyawazi owona nto. Ngapha koko, inokuba uyazi ukuba yintoni le incinci njengoko esazi ukuba yintoni umphefumlo. Uyazi ngenkangeleko yeempawu ezithile kunye neempawu zento, kodwa ngokubhekisele koku, ngaphandle kwezi, akazi, ubuncinci asikokude nje ukuba umbono wakhe ovuselelekayo lijelo apho ulwazi lufikelela kuye.
Umoya kunye nomphefumlo nengqondo akufuneki zisetyenziswe ngokufanayo njengezithetha-ntonye. Kwihlabathi lonke kukho iiodolo ezisixhenxe okanye iindidi zemiphefumlo kwiinqwelomoya ezine. Imiyalelo esixhenxe yemiphefumlo yeentlobo ezimbini: imiphefumlo esezantsi kunye nemiphefumlo enyukayo, i-obliutionary kunye nenguqu. Imiphefumlo eyehlayo inamandla, iyabongozwa, iphefumlelwe ukuba isebenze ngomoya. Imiphefumlo enyukayo yile, okanye ukuba ayiyiyo kufanele ukuba iphakanyiswe kwaye ikhokelwe yingqondo. Ezine kwezi-odolo zisixhenxe yimiphefumlo yendalo, i-odolo nganye inee-degrees ezininzi emhlabeni wayo. Umoya uphembelela umphefumlo ohla ngendlela ye -uterution ukusuka kwimozulu engabonakaliyo emzimbeni wekhonkrithi ngeendlela ezahlukeneyo zobomi kunye neefom kunye nezigaba zendalo, de ikhule okanye ingeniswe kwimeko yomntu. Umoya okanye indalo icinezela umphefumlo ukuya phambili okoko ibandakanya, kodwa kufuneka ngengqondo iphakanyiswe njengomphefumlo okhuphukayo kwindlela yokuzivelela, ngokwamanqanaba awahlukeneyo emiyalelo nganye kathathu ukusuka komntu ofayo ukuya kobuThixo ukungafi. . Umphefumlo yimbonakaliso, umxholo kunye nokudibana komoya, kunye nobomi nokuba yingqondo.
Ukwahlula phakathi kwemiyalelo esixhenxe singabiza ngokuba yimiphefumlo esezantsi yokuphefumla-imiphefumlo, imiphefumlo yobomi, imiphefumlo ekwimo, eyokwabelana ngesondo; kwaye imiyalelo enyukayo-imiphefumlo yezilwanyana, imiphefumlo yabantu, kunye nemiphefumlo yokungafi. Ngokumalunga nesine, okanye iodolo yesini, makuqondwe ukuba umphefumlo awusosini. Isondo luphawu lwento yomzimba, kuyo yonke imiphefumlo ekufuneka ilungisiwe ngaphambi kokuba iphakanyiswe kwindlela yokuvela kwengqondo. Ngayinye yee-odolo iphuhlisa ingqondo entsha emphefumlweni.
Imiyalelo emine yemiphefumlo yendalo ayisiyiyo kwaye ayinakho ukungafi ngaphandle koncedo lwengqondo. Zibakho njengemiphefumlo okanye ubomi okanye iifom ixesha elide, kwaye ke zibakhona emzimbeni wenyama ixesha elide. Emva kwethuba bayayeka ukubakho njengemiphefumlo emzimbeni kwaye kufuneka badlule kwixesha lotshintsho olwenzeka ekufeni. Ke ukusuka enguqukweni kuza umbutho omtsha, umntu omtsha, apho imfundo okanye amava kuloo myalelo kuyaqhubeka.
Xa ingqondo inxibelelana nomphefumlo ukuyikhulisa, ingqondo ayinakuphumelela ekuqaleni. Umphefumlo wesilwanyana womelele kakhulu ngengqondo kwaye uyala ukukhuliswa. Iyafa ke loo nto; ilahlekile indlela yayo; Kodwa ke, ngenxa yento ebaluleke, engayi kulahleka, ingqondo ibiza enye into. Ingqondo iyaphumelela ukukhulisa umphefumlo ukusuka kwisilwanyana ukuya kwimeko yomntu. Apho umphefumlo kufuneka ukhethe ukuba ufuna ukubuyela kwisilwanyana okanye uqhubeke nokungafi. Ifumana ukungafi kwayo xa isazi isazisi sayo ngaphandle kwaye ngokuzimeleyo kwingqondo eyayisincedayo. Ke loo nto ibingumphefumlo iba yingqondo, nengqondo iphakamise umphefumlo ukuba ube nengqondo inokudlula ngaphaya koko kubonakaliswe kumhlaba ongabonakaliyo, kwaye ibe yinto enye noMphefumlo oNgcwele wabo bonke. Yintoni le mphefumlo ichazwe kuyo Umhleli "Umphefumlo," uFebruwari, 1906, Vol. II, IZWI.
Kukho umphefumlo okanye umphefumlo odityaniswe nayo yonke incindi yento okanye indalo, ebonakalayo nengabonakaliyo; ngomzimba wonke, nokuba umzimba ungowamaminerali, imifuno, isilwanyana okanye isidalwa sasezulwini, okanye umbutho wezopolitiko, owezimbiwa okanye wezemfundo Oko kuguqukayo ngumzimba; okungaguqukiyo, ngelixa lihlangana ndawonye nomzimba oguqukayo onxulumene nawo, ngumphefumlo.
Into umntu afuna ukuyazi ayisiyonto ingako ngenani nangeentlobo zemiphefumlo; ufuna ukwazi ukuba yintoni umphefumlo womntu. Umphefumlo womntu awuyiyo ingqondo. Ingqondo ayinakufa. Umphefumlo womntu awufi, nangona unokufa. Inxalenye yengqondo inxibelelana nomphefumlo womntu okanye ihle iye emzimbeni womntu; kwaye oku kubizwa ngokuba yimizimba yenyama okanye ukuphindukuzalwa ngokutsha, nangona eli gama lingachanekanga. Ukuba umphefumlo womntu awoneleli ngokuchasene kakhulu nengqondo, kwaye ukuba ingqondo iphumelele ngokwenjongo yokuvela emzimbeni, iphakamisa umphefumlo womntu ukusuka kwimeko yomphefumlo ofayo uye kwisimo sokungafi. Ke loo nto yaba ngumphefumlo womntu ofayo iba yinto yokungafi — ingqondo. UbuKristu, ngakumbi imfundiso yokucamagushela, isekwe kule nyaniso.
Ngokukhethekileyo kwaye kungaphelelanga apho umphefumlo womntu luhlobo lwe-ethereal kunye nolungabonakaliyo, i-wraith okanye isiporho somzimba wenyama, obambe imbonakalo kunye neempawu zomzimba oguqukayo oguqukayo womzimba kunye kwaye uzigcine ziphilile. Kodwa umphefumlo womntu ungaphezulu koku; bubuntu. Umphefumlo okanye ubuntu bomntu yinto entle, ngumbutho omkhulu, apho zidityaniswe khona ngenjongo ethile, abameli kuyo yonke imiyalelo yokuhla kwemiphefumlo. Ubuntu okanye umphefumlo womntu ubambe ngokudibeneyo kwaye ubandakanya izinto ezingaphandle kunye neemvakalelo zangaphakathi kunye nezitho zazo, kwaye zilawule kwaye zilungelelanise imisebenzi yazo yomzimba kunye neengqondo, kwaye zigcina amava kunye nememori ngexesha lonke lobukho bayo. Kodwa ukuba umphefumlo womntu ofileyo awuzange uvuswe kwimeko yawo efayo — ukuba awuzange ube yingqondo-ke loo mphefumlo okanye ubuntu bufa. Ukuphakanyiswa komphefumlo ukuze ube yingqondo kufuneka kwenziwe ngaphambi kokufa. Oku kuba yingqondo kuthetha ukuba umntu uyazi ukuba uzimele geqe kwaye ngaphandle komzimba wenyama kunye neemvakalelo zangaphandle nezangaphakathi. Ngokufa komntu okanye komphefumlo womntu, imiphefumlo emele yona iyakhululwa. Babuya kwi-oda yabo eyahlukeneyo yokuhla kwemiphefumlo, ukungena kwakhona ngokudibeneyo komphefumlo womntu. Xa umphefumlo womntu usifa ayinyanzelekanga kwaye awuhlali ulahleka. Kukho into engafanga kuyo xa umzimba wayo wenyama kunye nemo yomoya wayo itshatyalalisiwe. Lowo mphefumlo womphefumlo ongafiyo yintsholongwane engabonakaliyo, yintsholongwane yobuntu, ekubizwa kuyo ubuntu obutsha okanye umphefumlo womntu kunye nokwakhelwa kuwo umzimba omtsha. Oko kubiza intsholongwane yobuntu okanye yomphefumlo yingqondo, xa loo ngqondo ikulungele okanye ilungiselela ukubonakala emzimbeni. Ukwakhiwa kwakhona kobuntu bomphefumlo womntu sisiseko esisekwe kwimfundiso yovuko.
Ukwazi ngazo zonke iindidi zemiphefumlo umntu ufuna uhlalutyo kunye nolwazi oluphangaleleyo lwezesayensi, phakathi kwazo ikhemikhali, ibhayoloji kunye ne physology. Emva koko kuyimfuneko ukulahla ukujija esikuthandayo ukubiza imethadysics. Elo gama kufuneka lume inkqubo yokucinga ichanekile kwaye ixhomekeka njengoko imathematics injalo. Sixhotywe ngenkqubo enjalo kunye nenyaniso zesayensi, siya kuthi ke sibe nesifundo sengqondo esiyinyani, isayensi yomphefumlo. Xa umntu eyifuna uya kuyifumana.